IZIZATHU EZI-5 ZAKHO IWINDOWS 10 IKHOMPYUTHA ISEBENZA KANCANE - KUXHASWE
Esikhathini lapho iningi lethu lidinga ukuzanelisa khona manjalo, ikhompyutha esebenza ngokunensa ingaba yinkinga yokuphila kwethu. I-Windows ibilokhu iyisistimu yokusebenza esezingeni eliphansi kusukela uBill Gates ayethula emhlabeni emuva ngonyaka we-1983. Kusuka ku-Windows 1.0 kuya ku-Windows 95, ne-Windows XP kuya ku-Windows Vista, lolu hlelo lokusebenza lushintshe kakhulu kuyo yonke le minyaka.
Okuqukethwe umbukiso 1 Une-hard drive ehlulekayo ezimbili Uphelelwa yimemori 3 Ziningi kakhulu izinhlelo ezisebenza ngasikhathi sinye 4 Kunezengezo eziningi kakhulu 5 Igciwane likhungethe ikhompyutha yakho
Ngokuvuselelwa ngakunye kweza izici ezintsha zobuchwepheshe ezingakaze zibonwe ngaphambili, kodwa futhi zafika nezithiyo futhi. Namuhla, I-Windows 10 isitolimende samanje abasebenzisi abaningi abavuma ukuthi yisona esingcono kakhulu okwamanje. Kodwa-ke, abanye basabhekene nekhompyutha yeWindows esebenza kancane. Uma ungena kulesi sigaba, nazi izizathu ezi-5 zokuthi kungani lokhu kungenzeka nokuthi ungakulungisa kanjani.
Une-hard drive ehlulekayo
I-hard drive yakho iyindawo lapho kugcinwa khona zonke izithombe zakho, amadokhumenti, umculo, amafayela nezinsizakusebenza ezilandekayo. Uma uvula ikhompyutha yakho bese ubona ukuthi izinhlelo zakho zokusebenza ngeke zivuleke, isistimu ayiphenduli ekuqaleni noma uqaphele ukuthi ikhompyutha yakho ayisebenzi kahle, kungenzeka Ukusetshenziswa kwediski okungu-100% . Uma umthamo wediski yekhompyutha yakho unamandla amancane, izokwenza kancane.
Ungakulungisa Kanjani Lokhu: Uma i-hard drive yakho ingaphezulu noma ngaphezu kuka-90% wamandla, sekuyisikhathi sokwenza izinguquko ezithile. Nazi izindlela ezimbalwa zokuhlanza i-hard drive yakho futhi ungasheshisa kanjani iWindows :
Khipha izinhlelo zokusebenza ezingasetshenzisiwe noma izinhlelo.
Susa izithombe ongasazifuni, umculo ongasawulaleli, namafayela ongasawadingi.
Sebenzisa insiza yokuhlanza iDiski ekusiza ukuthi uhlanze amafayela angenamsebenzi.
Gcina amafayela akho, izithombe, namanye amadokhumenti kwi-hard drive yangaphandle ye-USB.
Imemori Yokufinyelela Okungahleliwe, noma i-RAM, yilapho idatha igcinwa khona ngaphambi kokucutshungulwa. I-RAM yimemori yesikhashana, evame ukuchazwa njengengashintshi, esebenza kuphela lapho i-laptop noma ikhompyutha yakho ivuliwe. Lapho usucimile, yonke imemori yakho ye-RAM isikhohliwe. I-RAM yakho inesibopho sokugcina ikhompyutha yakho isebenza kahle ngokulayisha idatha yawo wonke umsebenzi owenzayo. Ingabe uhlela izithombe ezinekhono eliphezulu kusoftware yokuhlela isithombe? Noma mhlawumbe udlala umdlalo wevidiyo ongalanda odinga inani elifanele lesitoreji? Noma ngabe ikuphi icala, ungahle uphume usebenzise amakhono akho we-RAM.
Ungakulungisa Kanjani Lokhu: Ukukhulula isikhala se-RAM, nanka amanye amathiphu wokuqalisa:
Sebenzisa i-USB Flash Drive njenge-RAM
Khulisa ifayela lakho le- Imemori ebonakalayo
Khubaza noma susa isoftware engasetshenziswanga
Buyekeza ukusetshenziswa kwakho kwe-RAM
Ziningi kakhulu izinhlelo ezisebenza ngasikhathi sinye
Njengoba kushiwo ngaphambili, i-RAM yilokho okugcina idatha ngesikhathi sangempela. I-RAM yilokho okusiza ikhompyutha yakho ukuthi ithathe izinqumo futhi isebenze kahle. Kodwa-ke, uma ubona ukuthi ikhompyutha yakho ye-Windows isebenza ngokunensa, ungahle ube nezinhlelo eziningi kakhulu ezisebenza ngasikhathi sinye. Ingabe ungumuntu othanda ukugcina amathebhu angama-20 evulekile kusiphequluli sakho sewebhu? Uma kunjalo, lesi kungaba isizathu esisodwa sokuthi ikhompyutha yakho isebenze kancane. I-RAM isiza inqubo yekhompyutha yakho. Njengoba kuvulwe inqwaba yamathebhu, njenge-akhawunti yakho yeNetflix, i-Spotify, ne-Facebook, i-RAM yakho ngeke ikwazi ukuhambisana.
Ungakulungisa Kanjani Lokhu: Ukuze unikeze ikhompyutha yakho ikhefu, zama la maqhinga ukukhawulela inani lezinhlelo ezisebenza ngasikhathi sinye:
Qala kabusha ikhompyutha yakho ukuze usethe kabusha izinhlelo futhi uhlanze izinhlelo zokusebenza ezisebenza ngemuva.
Thola isandiso sesiphequluli sewebhu esihlanganisa inani lamathebhu owavulile.
Sebenzisa izinhlelo zokusebenza ezilula ezithatha isikhala esincane ukuya kuzo khulula imemori .
Kunezengezo eziningi kakhulu
Izengezo ziyindlela enhle yokuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi lapho uzulazula kuwebhu. Kodwa-ke, ukuba nezengezo eziningi kakhulu kungabamba phansi ikhompyutha yakho. Izengezo ezinjenge-ad-blockers zilula ngokwedlulele futhi zingenza ukuphequlula iwebhu kube lula futhi kujabulise. Kodwa-ke, ingabe uhlangabezane nezandiso zewebhu ezibonakala zimangalisa okwamanje, kodwa awuzidingi ngempela? Mhlawumbe ukulanda ifayela le- isandiso sokungena esikhundleni sosaziwayo lokho kushintsha amagama osaziwayo ezihlokweni zamanye amagama osaziwayo bekuyi-gimmick ehlekisayo, kepha uma unekhompyutha ihamba kancane kune-molasses, kungenzeka ukuthi yisikhathi sokuvalelisa.
Ungakulungisa kanjani lokhu: Ukuphonsa lezo zengezo ezingadingeki kudoti, landela lezi zinyathelo:
I-Google Chrome: Qhafaza kwesokudla kunkinobho yakho yeselulo engadingeki bese uchofoza inkinobho “susa ku-Chrome”.
IFirefox: Chofoza inkinobho yemenyu, khetha izengezo / izandiso, bese umane ususe izengezo ongasazidingi ohlwini.
I-Internet Explorer: Chofoza kumathuluzi, dlula ukuphatha izengezo, chofoza ku-bonisa zonke izengezo, bese ususa lezo ongasazifuni.
Igciwane likhungethe ikhompyutha yakho
Okokugcina, ngeshwa ungaba negciwane noma i-malware ehlasela ikhompyutha yakho. Ama-virus, i-malware, nokunye ukwephulwa kwezokuphepha okuyingozi kungasabalala njengomlilo wequbula uma kunganakekelwa. I-Malware ingadala izinkinga eziningi, njengokuntshontsha imininingwane yakho, ikuqondise kumasayithi wobugebengu bokweba imininingwane ebucayi, uphinde ucindezele izikhangiso kwisikrini sakho.
Ungakulungisa Kanjani Lokhu: Uma usola ukuthi ikhompyutha yakho ingaba negciwane, nakhu ukuthi ungayilapha kanjani inkinga:
Landa isoftware Elwa Namagciwane engathola amasayithi omgunyathi.
Letha ikhompyutha yakho / ikhompyutha ephathekayo kusevisi yekhompyutha efanele.
Qalisa kabusha ikhompyutha yakho bese ungene kwimodi ephephile
isd software iyekile ukusebenza
Ikhompyutha ehamba kancane ayikaze ibe mnandi. Uma usebenzisa ikhompyutha yakho njalo esikoleni, ebhizinisini, noma enjabulweni, ukulinda ikhasi ozolilayisha noma ifayela ozolilanda kungadala intukuthelo engafanele. Ukuze wandise isivinini sekhompyutha yakho ye-Window, bheka kulezi zinkinga ezingaba khona kanye nokuphulukiswa okungakusindisa ngokulandelayo!
Skena Futhi Lungisa Amaphutha weDrayivu ye-Disk nge-CHKDSK ku-Windows 10
5 izixazululo zokulungisa uhlelo lokusebenza lweNetflix olungasebenzi kumawindows 10
amafasitela 10 aqhubeka nokulala
isikrini esimnyama kumawindi wokungena 10
windows 10 susa izibuyekezo ezisalindile
windows 10 liphansi kunephutha lememori